Waa maxay barashada laba-luqad - ee ah cidda baranaysa luqadda - goormaad bilowdaa barashada luqadda?
Tababaradayada Waxbarashada Labada ah
Qalabka Korantada Dual
Qalabka Korantada Daabacaadda ee Daabaca (shabakadda internetka oo dhakhso ah)
Waa maxay barashada labadaba?
Waxaad isku dhafan kartaa aduunka ugu wanaagsan 2: barashada dugsiga iyo barashada goobta shaqada. Waxaad maalmaha 3 ku isticmaashaa dabaqa shaqada.
Waxaad baran doontaa maaddooyinka guud iyo aqoonta barashada ee barashadaada ee dugsiga.
Waxaad horumarinaysaa aqoonta farsamada iyo waayo-aragnimada shaqada ee shirkad dhab ah.
Shirkadda iyo dugsiguba waxay si joogto ah ugala hadlaan si joogta ah waxayna tilmaamayaan halka laga barto.
Ugu yaraan wakhti waxaad helaysaa saldhig adag oo xoog leh iyo qadar wanaagsan oo ah khibrad wax ku ool ah oo aad horumarinayso waayo-aragnimada khuseeya goobta shaqada muddada waxbarashadaada.
Waxaad heleysaa dibloomadaada waxbarashada dugsiga sare waxaadna isla markiiba tahay talaabo weyn oo ka horeysa dadkaaga!
Miyaad bixisay barashada laba-geesoodka ah?
Maalmaha aad shaqo-bixiyeha joogto, inta badan waa la bixin doonaa. Khidmadu waa mid go'an oo ku xiran da'daada iyo khibradaada. Kuwa dooranaya labada iskuul ayaa weli canshuur laga qaadayaa waalidiinta, adiga iyo waalidkaagaba sidoo kale waxay helayaan lacagta caruurta.
Waa maxay farqiga u dhexeeya labada barasho iyo tababarka?
Marxaladaha caadiga ah waxay ku siman yihiin wax ka hooseeya koorsada labada barasho. Sannadka toddobaad ee xirfadda, tusaale ahaan, waxaad raacdaa ilaa todobaad xarfaha 8 ee barnaamijka caadiga ah ee waxbarashada (kuwan waa maalmaha fasalada 40)
Kuwa dooranaya laba hawlood oo waxbarasho ah ilaa maalmaha 130 ee shirkadda.
Tababarada, waxay ugu horreyn tahay ujeeddada aad ku tababartaa waxa aad ka baratay dugsiga. Markaad baraneyso barashada, waxaad dhab ahaantii wax ka bartaa dabaqa shaqada.
Maxay tahay sababta labada iskuul ee iskuulkeena loo barto?
GO! Iskuulka Spectrumschool ee Deurne (Antwerp) waa hormuudka barashada laba-geesoodka ah. Waxaan horay u bixinnay wax ka badan 25 ee barashada laba-geesoodka nidaamka Barashada + Working. (waxbarashada waqti-dhiman waxay kaloo baraneysaa barashada)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barashada laba-geesood
Kala-barashada Dual Learning
Wixii faahfaahin dheeraad ah waad booqan kartaa bogga internetka ee Flanders Learning.
GO! Spectrumschool waxay kaqaybqaateen Ideal Dual, halkaas oo aan ka helnay fikrad ku saabsan wareegga galaaska ardayga ee Waxbarashada Labada ah.
Waxaan ka wada shaqeyneynaa mashruuca Yurub Erasmus + "Trialog". Macluumaad loogu talagalay dabagalka barashada barashada dabaqa shaqada.